Ingcindezi > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Ulamula unganciphisa umfutho wegazi
Izakhiwo zikalamusi Izithelo zeLanga zicebile ngamavithamini A, iqembu B, C, E, P, liqukethe i-potassium, i-calcium, i-magnesium, i-phosphorus, i-sodium, i-organic acid, uwoyela obalulekile, ama-pectins. ...
Itiye eliluhlaza: kwandisa noma kwehlisa ingcindezi?
Itiye eliluhlaza ngokumelene nomfutho wegazi. Umphumela wetiye eliluhlaza ekucindezelweni Itiye eluhlaza uthinta umfutho wegazi ngokuhlukile ngokuya imvamisa yokusetshenziswa namandla ephuzo. ...
Yikuphi ukucindezelwa okunqunyelwe i-Enap nemiyalo yomuthi
Imiyalo yokusebenzisa "i-Enap": yiphi ingcindezi yokuthi yiliphi ithathi okufanele ithathwe yi-Arterial hypertension iyisifo esibonakaliswa yizinga lokucindezela kanye nomonakalo wezitho ezibucayi ezibucayi. ...
Yikuphi ukucindezela engingathatha khona iKapoten: imiyalo nokubuyekezwa
Amaphilisi weKapoten - i-ambulensi yomfutho wegazi ophakeme nengcindezi. I-Pharmacotherapy ekulweni kwayo inamakhulu emithi yokwelapha umfutho wegazi ophakeme. Enye yezidakamizwa ezaziwayo zokucindezela yiKapoten. ...
I-sea sihlahla sivame ukutholakala ngokucindezela
Ngabe i-sea buckthorn iluthinta kanjani umfutho wegazi ophezulu? I-sea buckthorn inezinto eziningi zokwelapha kubantu. Okokuqala, kuyasiza ngokulungiswa kwengcindezi yegazi, inqubo ejwayelekile yohlelo lwezinhliziyo. ...
Iphakamisa umfutho we-rosehip noma lowers?
I-rosehip ene-hypertension ingadakwa i-Rosehip ingakhuphula ingcindezi futhi iphansi. ...
Ukubuyekezwa mayelana Noliprel Pew Noliprel iminyaka engu-2. Kuze kube manje, umthamo we-2,5 mg unele ukulawula ingcindezi. Kwesinye isikhathi kuyenyuka lapho isimo sezulu sishintsha. Imiphumela emibi yenethiwekhi. ...
ISt John wort yehlisa umfutho wegazi noma inyuke?
I-wort yaseSt. ISt John wort (evela eLatin Hypericum), ingeyomndeni wakwaSt. Wort (Hypericaceae). Utshani obungapheli, isihlahla esingagxiliwe noma isihlahla esinezimpande ezimbambile futhi nohlelo olukhulu lwezimpande. ...
Ngabe i-beetroot iphakamisa noma yehlise umfutho wegazi?
Ngabe i-beetroot iyanda noma inciphisa ingcindezi? Ama-beet aqukethe i-calcium ne-sodium (1: 10), lesi silinganiso siqinisekisa ukuqothulwa kwe-calcium egazini. Kuyasiza ngemithambo ye-varicose. ...
Ingabe ikhofi iyanda noma yehla ingcindezi?
I-coffee kanye nomphumela wayo Imibono yabodokotela mayelana nekhofi ihlukaniswe ngokwezigaba, iningi labo lithatha njengokuthi libalulekile ekulinganiseni (azikho ngaphezu kwezindebe ezintathu ngosuku), lapho kungekho khona ukungqubuzana kwabantu. ...
Ngabe i-ginger iyathinta umfutho wegazi: yanda noma inciphe, yiziphi izindlela zokupheka ezinconyelwe inhliziyo?
Kwenyusa ingcindezi ye-ginger noma i-lowers? Ngabe i-ginger inyusa ingcindezi noma iphansi? Umbuzo akuyona eyize, ngoba i-ginger ingenye yezinongo ezidumile, futhi kwezokwelapha esempumalanga nayo ingumkhiqizo wokwelapha. ...
Ukunakekelwa okuphuthumayo kwesifo se-hypertensive: i-algorithm
Ukunakekelwa okuphuthumayo kwabezimo eziphuthumayo kwe-hypertensive. Isifo se-Hypertgency yisimo esiphuthumayo esidinga ukunakekelwa ngokushesha kwezokwelapha. ...
Uju luba namuphi umthelela ekucindezelweni kwegazi: luyanda noma luyancipha?
Ingabe uju lukhulisa umfutho noma luphansi? Izakhiwo eziwusizo kanye ne-contraindication Uju olwenziwe ekhaya kungumkhiqizo omangalisayo, oboniswa ngezakhiwo ezingejwayelekile zokuphulukisa. ...
Ingabe iwayini elibomvu liyaphakamisa noma lihlise umfutho wegazi?
I-Red red - yandisa noma yehlise ingcindezi? ...
Ama-cranberry athinta kanjani umfutho wegazi
Ama-cranberry ehlisa noma akhuphula umfutho wegazi? Wonke umuntu uyazi izakhiwo ezizuzayo zama-cranberry. Lesi sitshalo esiyingqayizivele sisetshenziselwa ukwelapha izifo eziningi. Kuliqiniso yini ukuthi ama-cranberry anciphisa umfutho wegazi? Izimbangela zokuqina komfutho wegazi ziningi! ...
Ngabe ubhiya uyakhuphuka noma wehlise ingcindezi?
Umphumela wabhiya ekucindezelweni kwegazi Abagcini nje abathandi bakabhiya abaningi, kodwa nodokotela baphambana nemikhonto yabo mayelana nokuthi ubhiya nengcindezi kuhlobene kanjani. ...
I-Guelder-rose from pressure and hypertension - izakhiwo eziwusizo
Ingabe i-viburnum iphakamisa noma yehlise umfutho wegazi? Amakhambi okwelapha angathuthukisa lesi simo ezifweni ezahlukahlukene, kufaka phakathi umfutho wegazi ophakeme. ...
Ingabe iminti inyuka noma yehlise ingcindezi yomuntu? Iminti ivame ukusetshenziswa emithini yesintu njenge-antiseptic. Ingabe i-peppermint idambisa ingcindezi futhi ilungele iziguli ezinomfutho wegazi? ...
Ngabe i-vodka iwuthinta kanjani umzimba - ingabe yenyuka noma yehlise ingcindezi?
Ngabe i-vodka inyuka noma yehla ingcindezi? Izici zokusebenzisa nezincomo Singasho ngokuqiniseka ukuthi i-vodka cishe iyisiphuzo esithandwa kakhulu ezweni lethu. ...
I-AliveMax: ukubuyekezwa komkhiqizo ongemuhle
Isifo sikashukela ezinganeni nasentsheni
Ungazi kanjani ukuthi yiziphi izimpawu zesifo sikashukela emadodeni
Izimpawu zesifo sikashukela emadodeni ukuthi singasibona kanjani lesi sifo ekuqaleni kwesifo sikashukela emadodeni kubonakala nje esiteji lapho umzimba usuthole ushintsho olungenakulungiswa. ...
Ungayisebenzisa kanjani isidakamizwa i-Cigapan?
Yini engcono kwisifo sikashukela - iGlucophage noma iMetformin? Ukuqhathanisa izidakamizwa, imiyalo, ukubuyekezwa
Cinnamon wohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela
ImithiAmanyikweOkunyeInsulinUkulawulwa kwesifo sikashukelaAma-sweetenersIsifo sikashukelaUkwelashwa okuhlukileAmamitha kashukela egaziUkuhlaziya
I-Aspirin neParacetamol: ukuqhathanisa futhi yiliphi ikhambi elingcono
Umuthi Dioflan: imiyalo yokusebenzisa, intengo, ukubuyekezwa
Inkomba ye-Glycemic yezinsimu nezinhlamvu, itafula eligcwele
Ukuqunjelwa izinzwane kushukela
I-Rosehip ene-cholesterol ephezulu